Waa sidee xaaladda ciyaaryahan Idiris Aamiin Cali oo shalay joogga ka dhacay isagoo ku guda jiray tababarka kooxdiisa Dekedda? – Gool FM
Haaruun June 2, 2019
(Muqdisho) 02 Juunyo 2019. Waxaa soo hagaagaysa xaaladda difaaca kooxda Dekedda ee Idiris Aamiin Cali, kaasoo shalay joogga ka dhacay dhaawacna uu soo gaaray isagoo ku guda jira tababarka kooxdiisa.
Laacibka daafaca ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Dekedda ee Idiris Aamiin Cali ayaa shalay waxaa soo gaaray dhaawac halis ah kaddib tababarkii uu la qaadanayey kooxdiisa Dekedda.
Kooxda Dekedda ayaa waxay tababar adag ku qaadanaysay garoonka Jaamacadaha ee Degmada Hodan xilli ay iskugu diyaarinayso horyaalka Somali Premier League oo dib u furmi doona 07 bishaan Juunyo.
Idiris Aamiin Cali ayaa dhaawac uga baxay shalay tababarka kaddib markii uu soo gaaray dhaawac canqowga ah intii uu ku guda jiray tababarka kooxdiisa.
Kaddib markii uu ka baxay tababarka isagoo dhaawacan ayaa haddana ciyaaryahanku mar qura uu istaagga ka dhacay, maadaama uu tababar adag qaadanayey isagoo Sooman.
Xaaladdiisa caafimaad oo halis gashay kaddib markiiba waxaa ciyaaryahanka loola cararay Isbitaalka, halkaasoo lagu baxnaaniyey xaaladdiisa caafimaad.
Isbitaalka Kalkaal ee Muqdisho ayaa la geeyey ciyaaryahankan, halkaasoo markii la seexiyey oo ay dakhaatiiru la tacaaleen xaaladdiisa uu soo kabsaday, waxaana Dakhtarku uu sheegay in xiddig uu haatan xaaladdiisu aad u wanaagsan tahay isla markaana kaliya uu naqasku ku dhegay.
Guddoomiyaha kooxda Dekedda C/llaahi Faarax ayaa ka mid ahaa dadkii gurmad caafimaad u fidiyey ciyaaryahan Idiris Aamiin Cali, waxaana markii uu la hadlay dakhaatiirtu ay u sheegeen in xaaladda laacibku uu wanaagsan yahay haatan.
“Waxaa ii rumoowday riyada tan iyo carruurnimadayda, waxaana isku dayi doonaa inaan ku guuleysto waxyaabo intaas ka sii badan” - Saalax